Data ဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ » Happy Friday>>>“ဤဝန်ဆောင်မှုအား ရယူအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် ဖော်ပြပါရှိသော နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသည့် MPT ၏ အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။”
သောကြာနေ့တွင် Data Carry Plus Packဝယ်ယူတိုင်း 800MB အထိ အပိုဆောင်းဒေတာရရှိနိုင်ပြီး HtawB 5X နှင့် HtawB 7X pack ဝယ်ယူတိုင်း ၁၀၀၀ ကျပ်အထိ ဖုန်းဘေလ်အပိုလက်ဆောင် ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(ကျပ်) HtawB 5X ဖုန်းဘေလ် (ကျပ်) အပိုဆောင်း HtawB 5X ဖုန်းဘေလ် သက်တမ်း ဝယ်ယူရန် လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးရန်
(ကျပ်) HtawB 7X ဖုန်းဘေလ် (ကျပ်) အပိုဆောင်း HtawB 7X ဖုန်းဘေလ် သက်တမ်း ဝယ်ယူရန် လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးရန်
၁၁၁၁ ကျပ် ၇၇၇၇ ကျပ် ၂၀၀ ကျပ် ၁၅ ရက် *7001# *700# *224#
၂၂၂၂ ကျပ် ၁၅၅၅၄ ကျပ် ၄၀၀ ကျပ် ၃၀ ရက် *7002#
၅၅၅၅ ကျပ် ၃၈၈၈၅ ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ် ၆၀ ရက် *7005#
၃၀ ရက်[သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက်အတွင်း ဒေတာသယ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်]
*777*1# 1332 သို့ DC1 ဟုပေးပို့ရန် *777#	 *224#
ဒေတာလက်ကျန်နှင့်သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်ခွင့်ရရှိမည့် Data Carry Plus အစီအစဉ်မှ မူလဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်၏ ဒေတာများ လျော့နည်းလာချိန်တွင် နောက်တစ်ကြိမ်ရွေးချယ်ဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ဘဲ အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးနိုင်သောအစီအစဥ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့်Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်အသစ်များကို ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ သတ်မှတ်ထားသော Data Carry Plus packages များကို အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးရန် အဆိုပြုဝယ်ယူထားပါက ဒေတာလက်ကျန်ပမာဏ 50 MB အောက်လျော့နည်းသောအချိန်တွင် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်များကဲ့သို့ 1000 GB အထိ lucky data များ ကံထူးနိုင်မည့်အပြင် ဒေတာလက်ကျန်များကိုလည်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက်အတွင်းသယ်ဆောင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီအစဉ်ကိုအောက်ပါ ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၉၇၉ ကျပ်နှင့် ၁၂၇၉ ကျပ် Data Carry Plus Packages များအတွက်သာ ရယူ နိုင်ပါသည်။
905 MB 30 MB
၃၀ ရက်[သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက်အတွင်း ဒေတာ
ပက်ကေ့ချ်၏ လက်ကျန်balance 50MB အောက်ရောက်ရှိသွားချိန်တွင် အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုး ဝယ်ယူမည်
1,180 MB 35 MB
အပိုဆောင်းလက်ဆောင်များ ရရှိဖို့အတွက် အသုံးပြုသူများသည် Data Carry Plus Pack၊ ထောဘီ ၅ ဆ နှင့် ထောဘီ ၇ဆ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်မျိုးမျိုးကို သောကြာနေ့များတွင် ဝယ်ယူဖို့လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူပြီးပါက သက်ဆိုင်ရာအပိုဆောင်းလက်ဆောင်များ ခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပိုဆောင်းခံစားခွင့်သက်တမ်းကို ဝယ်ယူထားသည့် Product ၏ သက်တမ်းအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Data Carry Plus Pack ဝယ်ယူသူများမှာ အသုံးပြုရန်ကျန်ရှိနေသောဒေတာများကို သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇) ရက်အတွင်း သယ်ဆောင်အသုံးပြုခွင့်ရှိပါတယ်။
Data Carry Plus၊ ထောဘီ ၅ ဆ နှင့် ထောဘီ ၇ဆ ပက်ကေ့ချ်များကို အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဒေတာပမာဏများ ပေါင်းစည်းသွားမည့်အပြင် အသုံးပြုခွင့်ကို နောက်ဆုံးသက်တမ်းအထိ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်ကို ဆွေ/ရှယ်/ရွှေ အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA Prepaid/Postpaid အသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ထောဘီ ၅ ဆ နှင့် ထောဘီ ၇ဆ ပက်ကေ့ချ်များကို ဆွေ/ရှယ်/ရွှေ အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA Prepaid အသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
CDMA, Base Tariff နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသူများ အသုံးပြု၍မရပါ။
သောကြာနေ့တွင် မည်သည့် channel/method ကိုမဆို အသုံးပြု၍ ဝယ်ယူတိုင်း အပိုဆောင်း ခံစားခွင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
၁။ Happy Friday Data Carry Plus ဆိုတာဘာလဲ?
သောကြာနေ့တိုင်းတွင် Data Carry Plus Pack ဝယ်ယူပါက အပိုဆောင်းဒေတာ(MB) များကို ရရှိမည့်အပြင် ရက်ပေါင်း (၃၀) သက်တမ်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ မည်သည့် ထပ်ဆောင်း ကောက်ခံမှု/ကျသင့်မှု ရှိမည် မဟုတ်ပါ။
၂။ သောကြာနေ့မှာ Data Carry Plus Pack ဝယ်ပါတယ်။ မည်သည့်အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ရရှိမှာပါလဲ?
သောကြာနေ့မှာ Data Carry Plus Pack ဝယ်ပါက အောက်ပါအတိုင်း အပိုဆောင်းဒေတာ (MB) များ ရရှိမှာပါ။
၃။ သောကြာနေ့မှာ HtawB 5X/7X Pack ဝယ်ပါတယ်။ မည်သည့်အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ရရှိမှာပါလဲ?
သောကြာနေ့မှာ HtawB 5X/7X Pack ဝယ်ပါက အောက်ပါအတိုင်း အပိုဆောင်း Htaw B Balance များရရှိမှာပါ။
၄။ Happy Friday Data Carry Plus ကိုဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင် ပါသလဲ?
၅။ သောကြာနေ့တွင် Data Carry Plus Pack ကို အကြိမ်အရေ အတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
သောကြာနေ့တွင် Data Carry Plus Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဒေတာပမာဏ များလည်း ပေါင်းစည်းသွားမယ့်အပြင် နောက်ဆုံးသက်တမ်းအထိ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ၁၂၉၉ကျပ်တန် Data Carry Plus Pack ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ အခမဲ့ Facebook အသုံးပြုခွင့်မရရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲ?
ယခုအခြေအနေတွင် social medias အင်တာနက်များ ရပ်ဆိုင်းထားသည့်အတွက် Data Carry Plus မှ Facebook data service ကို ရပ်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သောကြာနေ့မှာ Data Carry Plus Pack ဝယ်ပါက 800MB အထိ အပိုဆောင်းဒေတာ (MB) များ ရရှိမှာပါ။
၇။ Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ် များကို ဝယ်ယူပြီး ထိပေါက်အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ကံစမ်း နိုင်ပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်။ မည်သည့် C hannel မှ မဆို ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ထိပေါက် Chance (၁)ခု ရရှိကာ MPT4U တွင် အပိုလက်ဆောင်ဒေတာများ ထပ်မံကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၈။ Htaw B အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ကို ဘာတွေသုံးလို့ရမှာလဲ။ ဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးနိုင်မှာပါလဲ?
Htaw B အပိုဆောင်းလက်ဆောင်ကို MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုရန်၊ စာတိုပေးပို့ရန်နှင့် သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်အတွက်သုံးစွဲသူဝယ်ယူသည့်ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းအတိုင်း အသုံးပြုနိုင် မှာပါ။ ဥပမာ – သောကြာနေ့တွင် ဖုန်းဘေလ် ၁,၀၀၀ကျပ်ကို HtawB 5X ဖုန်းဘေလ် ၅,၀၀၀ကျပ် ပြောင်းလဲပါက အပိုဆောင်းလက်ဆောင် ၂၀၀ ကျပ်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး [စုစုပေါင်း ၅၂၀၀ကျပ်ကို] ၁၅ ရက်ကြာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၉။ သောကြာနေ့မှာ အခြားပက်ကေ့ချ် (Social pack, night time data pack, voice pack) တွေဝယ်ယူပါတယ်။ အပိုဆောင်းခံစားခွင့်ရရှိမှာလား?
မရရှိပါ။ MPT ၏ လူကြိုက်အများဆုံးပက်ကေ့ချ်များဖြစ်သည့် Htaw B နှင့် Data Carry Plus Packs များဝယ်ယူပြီး အပိုဆောင်းခံစားခွင့်များရယူလိုက်ပါ။ သောကြာနေ့တွင် Data Carry Plus Pack ဝယ်ပါက အပိုဆောင်းဒေတာများကို ရက် (၃၀) သက်တမ်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
၁၀။ ဘယ်နည်းလမ်းကိုသုံးပြီး ဝယ်ယူရင် အပိုဆောင်းခံစားခွင့်ရမှာလဲ။ ဝယ်ယူရမည့်နည်းလမ်းကို သတ်မှတ်ထားပါသလား (ဥပမာ - MPT4U၊ USSD အစရှိသဖြင့်)?
သတ်မှတ်မထားပါ။ MPT4U၊ *777#၊ *500#၊ *700#၊ *106# အစရှိသဖြင့် မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမဆို အသုံးပြု၍ သောကြာနေ့တွင် Data Carry Plus Packs နှင့် HtawB 5X/7X အသစ်ဝယ်ယူလိုက်တိုင်း အပိုဆောင်းခံစားခွင့် များ ရရှိမှာပါ။
၁၁။ Friday မှာ Data Carry Plus Packs နဲ့ Htaw B ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ရပါသလား?
ရပါတယ်။ Data Carry Plus Pack ကိုလက်ဆောင်ပေးမည်ဆိုပါက MPT4U (သို့) *106*2# (သို့) *777# မှတစ်ဆင့် လက်ဆောင်ပေးမည့် Pack ကို ရွေးချယ်၍ “2. Gift (သို့) 2. လက်ဆောင်ပေးမည်”ကို ရွေးချယ်ကာ လက်ဆောင် ပေးလိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ HtawB 5X Pack ကို လက်ဆောင်ပေးမည်ဆိုပါက MPT4U (သို့) *500# မှတစ်ဆင့် လက်ဆောင်ပေးမည့် Pack ကို ရွေးချယ်၍“2. Gift”ကို ရွေးချယ်ကာ လက်ဆောင်ပေးလိုသည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်လိုက်ပါ။ HtawB 7X Pack ကို လက်ဆောင်ပေးမည်ဆိုပါက MPT4U (သို့) *700# မှတစ်ဆင့် လက်ဆောင်ပေးမည့် Pack ကို ရွေးချယ်၍“2. Gift”ကို ရွေးချယ်ကာ လက်ဆောင်ပေးလိုသည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်လိုက်ပါ။ သောကြာနေ့တွင်လက်ဆောင်ပေးပါက လက်ဆောင်ရရှိသူသည် သက်ဆိုင်ရာ Data Carry Plus (သို့) Htaw B ၏ သောကြာနေ့တွင်ရရှိမည့် အပိုဆောင်းခံစားခွင့်များပါ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။